Notendrena nandritra ny filankevitry ny minisitra androany ny Governora. Miisa 11 izy ireo no voatendry, miandry fanendrena amin’ny fotoana maraka ny sasany.
Misy efa lehiben'ny Faritra teo aloha, misy efa solombavam-bahoaka teo aloha, misy Senatera amperin'asa amin'ireo voatendry.
mercredi, 25 septembre 2019 20:17
Rond Point Antanimena – Sampanana Ambodivona: Ho tapaka ny làlana ny 24 septambra - 11 oktobra 2019
Araka ny didy navoakan’ny Prefektioran’ny Polisy Antananarivo dia tapaka ny ampahan-dalana eo amin’ny Rond Point Antanimena hatreo amin’ny sampanana miazo an’Ambodivona manomboka ny alakamisy 26 septambra amin’ny 4 ora maraina ka hatramin’ny zoma 11 oktobra amin’ny 4 ora maraina.
mercredi, 25 septembre 2019 19:56
Mahajanga: Botry rendrika namoizana ain'olona iray
Rendrika sahabo 800m miala ny "Quai Orange" Mahajanga ny botry mampitohy an'i Aranta sy Katsepy Mahajanga. Ny talata 24 septambra 2019 no niseho ny loza. Olona miisa 25 no nentin’ilay botry. Namoy ny ainy ny iray tamin’ireo mpandeha, zaza iray, 8 taona karohina, ny 23 dia avotra araka ny vonjy aina nataon'ny Brigade Port Zandarimaria sy ny APMF ary ireo olona tsara sitrapo.
mercredi, 25 septembre 2019 19:40
Jirama: Ireo mpikamban’ny Filankevi-pitantanana vaovao
Nandritra ny filankevitry ny minisitra ny 18 septambra 2019 no nanendrena ireo mpikambana vaovao ao amin’ny Filankevi-pitantanan’ny orinasa Jirama. Miisa folo izy ireo dia :
- Andriamanampisoa Rasamoelina Soloniaina, Solontenan’ny Fiadidiana ny Repoblika
- Tsaboto Roger, Solontenan’ny Primatiora,
- Maitre Ratovondrajao Fredon, noho ny traikefany manokana,
- Ramaroson Andry Heriniaina, Solontenan’ny Ministeran’ny angovo, ny rano ary ny akoran’afo
- Raoelijaona Bien Aimé Victorien, Solontenan’ny Ministeran’ny toekarena sy ny fitantanam-bola ,
mercredi, 25 septembre 2019 19:34
Praiminisitra Christian Ntsay: Misy misoloky amin’ny facebook
« Tsy mbola nanana ary tsy nampiasa « facebook » mihitsy », io no fanambarana nataon’ny Fiadidiana ny praiminisitra androany, manoloana ny fahitàna fampiasàna hosoka eny amin’ireo tambajotran-tserasera izay ataon’ny olona manana fikasan-dratsy, indrindra fa ao amin’ny tambajotra facebook, izay manao fanambaràna ampahibemaso, amin’ny anarany manokana sy amin’ny maha-lehiben’ny Governemanta azy, ny Praminisitra Ntsay Christian, fa
Tsy tompon’andraikitra amin’izay mety ho fampiasàna ny anarana « Christian Ntsay » na « Ntsay Christian » ao amin’izany tambajotra izany, hoy hatrany ny fanambarana izay manantena ny fahamalinan’ny olom-pirenena rehetra mikasika io resaka io.
mercredi, 25 septembre 2019 19:30
Fifidianana kaominaly: Manomboka ny « pré-campagne »
Manomboka izao dia tafiditra tanteraka ao anatin’ny fotoana fiomanana mialoha ny fampielezankevitra (pré-campagne) isika, hoy ny eo anivon’ny CENI. Efa saika samy nahazo ny laharany ao amin’ny bileta tokana ny kandida Ben’ny tanàna sy mpanolontsaina rehetra, ary samy afaka manangana ny komity mpanohana azy eny anivon’ny Kaominina sy ny Fokontany.
Afaka mampahafantatra ny tenany ihany koa ireo kandida, saingy manentana hatrany ny CENI ny amin’ny tsy tokony hanaovana endrika fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana.
Hanomboka ny talata 05 novambra 2019 amin’ny 06 ora maraina hatramin’ny alatsinainy 25 novambra amin’ny 12 ora alina ny fampielezan-kevitra.
mercredi, 25 septembre 2019 19:20
Fifidianana kaominaly: Hatonta eny amin’ny Trano Printim-pirenena ny biletà tokana
Hanomboka amin’ny herinandro ho avy io ny fanontana ny biletà tokana eny amin’ny Trano Printim-pirenena. 41 andro no fe-potoana tokony hanontana izany araka ny tetiandro efa napetraky ny CENI mba hahazoana manaparitaka ireo fitaovam-pifidianana ara-potoana manerana ireo biraom-pifidianana rehetra.
Miisa 25 388 ireo biraom-pifidianana manerana ny Nosy, tsy nahitana fiovana fa izay efa nisy tamin’ny fifidianana Solombavambahoaka no hampiasaina amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolotsaina ny 27 novambra 2019. Haverina havoaka ofisialy ny lisitry ny biraom-pifidianana ny 27 septambra ho avy izao, ary azon’ny rehetra anaovana fanamarihana.
mercredi, 25 septembre 2019 19:04
Fifidianana Ben’ny tanàna: Filatsahan-kofidiana nekena 6 275 no neken’ny CENI
6 317 ireo Filatsahan-kofidiana voarain’ny CENI. Ahitana kandida ho Ben’ny tanàna avokoa ireo Kaominina miisa 1 695 manerana an’i Madagasikara. Nolavin’ny CENI ny 42 tamin’ireo filatsahan-kofidiana voaray ; nekena ny 6 275. Misy 45 ireo Kaominina ahitana kandida tokana.
Mety mbola hisy fiovana ireo antotanisa ireo hatramin’ny sabotsy 28 septambra 2019, araka ny fanazavana avy eo anivon’ny CENI, mbola misy mantsy ireo filatsahan-kofidiana nolavina nakarin’ny kandida eny amin’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana ary iandrasana ny didy avy aminy.
4 960 ireo filatsahan-kofidiana mpanolotsaina voaray teny anivon’ireo OVEC manerana ny Nosy. Nolavina ny 58 tamin’ireo ; miisa 4 902 ny filatsahan-kofidiana nekena.
Miisa 8 ireo Kaominina izay tsy manana kandida, dia ny Kaominina Mahabe, Distrika Besalampy. Amparihintsokatra sy Antsangasanga ao amin’ny Distrika Ambatondrazaka. Ambatofisaka II, Ambodinonoka, Andonabe Sud, Lohavanana ary Sahakevo ao amin’ny Distrika Marolambo.
Miisa 148 ireo Kaominina ahitana kandida tokana amin’ny fifidianana mpanolotsaina.
mercredi, 25 septembre 2019 18:22
Fifidianana Ben’ny tanàna: 45 ireo Kaominina ahitana kandida tokana
Fifidianana Ben’ny tanàna: 45 ireo Kaominina ahitana kandida tokana.